Masakadza, Taylor back for Zim - NewsDay Zimbabwe
Home Sport Masakadza, Taylor back for Zim
The Zimbabwe national cricket team have been boosted by the return to fitness of the star duo of captain Hamilton Masakadza and Brendan Taylor ahead of the tour to the Netherlands for two one-day international (ODI) matches and as many Twenty20 internationals.
The two veterans missed the ODI series against United Arab Emirates (UAE) in April, with Masakadza nursing a left thumb injury, while Taylor was sidelined by a right calf muscle tear.
Following their recovery, both of them have been included in Zimbabwe’s 16-man squad that is set to leave for the Netherlands tomorrow.
Three of the players who faced the UAE – Regis Chakabva, Timycen Maruma and Brian Chari – have missed out on the latest tour because they are currently playing
Zimbabwe will, however, still travel with a strong squad that also includes batsmen Craig Ervine, Sikandar Raza, Sean Williams, Solomon Mire and seamers Tendai
Chatara and Kyle Jarvis.
Uncapped left-arm spinner Ainsley Ndlovu has been retained and he will be hoping to finally make his bow during the tour, while opening batsman Tinashe
Kamunhukamwe has also made the cut.
The Lalchand Rajput-coached side will first face the Netherlands in the ODIs scheduled for June 19 and 21 before the two sides clash in the T20I matches set
for June 23 and 25.
The ODI series against Ireland is scheduled for July 1, 4 and 7, while the T20I matches are slated for July 10, 12 and 14.
Next articleZanu PF youths spoil for a fight